အတွင်းပိုင်နံရံကို မည်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်မည်နည်း။ | Weber Cambodia
All စိုထှိုင်းမှု products
ဧည့်ခန်းနံရံဟောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်လိုုခြင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နှင့် မသန့်ရှင်းတော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းပြချက်အနေဖြင့် နံရံများပေါ်တွင် ဆေးသုတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုနေရာများကိုဆေးသုတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခန်း၏ အပြင်အဆင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ နှင့် ဝန်းကျင်ကြောင့် ဆေးအရောင် စသည့်အချက်များသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်သော အချက်များဖြစ်ပါသည်။အိမ်သုတ်ဆေးအမျိုးအစားအများကြီးထဲမှ အမျိုးအစား၊ပုံံစံနှင့် အရောင်ရွေးချယ်ခြင်းသည် စိတ်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်လာသည်။ထိုကိစ္စများကို ကျွမ်းကျင်သော နယ်ပယ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုုင်ရာမဂဂင်ဇင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀က်ဆိုဒ် နှင့် အရောင်နမူနာများက ရွေးချယ်ရန်ကူညီပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့က သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများအကောင်ထည်ပေါ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
ကောင်းမွန်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်များကို ရှာဖွေပါ
လှုံဆော်ပေးခြင်း, အကောင်းဆုံး လက်တွေကျွမ်းကျင်မှု, သစ်လွင်တောက်ပြောင်ပြီး မူလစိတ်ကူကောင်းများ ကို ကျွန်တော် ၀က်ဆိုဒ်မှ ရယူလိုက်ပါ
ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူပါ weberမှ ရည်ညွှန်းသော ပညာရှင်များ နှင့် အရောင်းဆိုင်ခွဲများကို ရှာဖွေပါ
Fondadistributor
လုပ်ငန်းခွင်ကို စမ်းစစ်သုံးသပ်ပါ။ အချိန်နှင့် ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ပါ။
Weber App ကိုအသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အိမ်အတွင်းနံရံ ပြုပြင်မွန်းမံရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့် အဆင့်များ
အိမ်သုတ်ဆေး မသုတ်လိုသော နေရာများကို ပြင်ဆင်ပါ
လေးလံသော ပစ္စည်းများကို ရွေ့ပြောင်းရန်ခက်ခဲမှုကြောင့် ပလတ်စတစ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးကာ ပျက်ဆီးမှုမှ ကာကွယ်လိုက်ပါ။ သုတ်ဆေးသုတ်လိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သော ကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများကို အဆင်သင့်ရှာဖွေထားပါ။ သုတ်ဆေးသုတ်လိမ်းမည်မဟုတ်သော တံခါးနှင့် ပြူတင်းပေါက်ဘောင်များကို တိပ်ပြား (သို့) နိုင်လွန်ပြားဖြင့် ကပ်ကာ ကာကွယ်ပေးရပါမည်။
မျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း
သုတ်ဆေးသုတ်လိမ်းမည့် မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်၊ သံချေး၊ အသည်အကြေး အစရှိသည်တို့မှ ကင်းစင်နေရပါမည်။
မျက်နှာပြင် သည်လုံလောက်သော ချောမွေ့မှုမရှိသေးဘဲ အက်ကြောင်း၊ ဟကွဲရာများ ရှိပါက ဦးစွာ သင့်လျော်သော် မျက်နှာပြင်ညှိ ပလာစာဖြင့် ပြုပြင်ဖာထေးပေးရပါမည်။ သုတ်ဆေး သုတ်လိမ်းပေးရမည့် မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့နေရန်လိုအပ်ပါသည်။
သုတ်ဆေး မသုတ်လိမ်းမှီး သင့်လျော်သော ခံဆေးကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။ ခံဆေးလိမ်ခြင်းသည် သုတ်ဆေး၏စွဲအား ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ပြုလုပ်ပေးရန် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အကြောင်းမှာ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပေါက်များကို ဖြည့်တင်းပေးကာ အပေါ်ဆုံးထပ် ဆေးကုတ်တင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း သက်သေစေပါသည်။
သုတ်ဆေး၏ ဂုဏ်သတ္တိကို အခြေခံကာ အိမ်သုတ်ဆေးကို ရွေးချယ်ပေးရပါမည်။ ခံဆေးသုတ်လိမ်းပြီး6နာရီတိတိထကြာအောင် ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းပေးရပါမည်။ ခံဆေးသုတ်လိမ်းပြီးနောက် အိမ်သုတ်ဆေးကုတ်တင် နှစ်ကုတ်ကို သုတ်လိမ်းပေးနိုင်သည်။ သုတ်လိမ်းမည့် ဆေးလွှာ အရေအတွက်ကို ဆေး၏ဂုဏ်သတ္တိနှင့် မျက်နှာပြင် အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် နက်မှောင်သော အရောင်များတွင် ဆေးလွှာကို သုံးလွှာ အထိတစ်ခါတစ်ရံ သုတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြောက်ခံရန်အတွက် အနည်းဆုံး တစ်လွှာကို 2-6 နာရီကြားကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းပေး ရပါမည်။ အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို မပြုလုပ်သေးဘဲ ဆေးလုံးဝ ခြောက်သွားသည်အထိ အနှောင့်အယှက်မဲ့ စွာထားပေးရပါမည်။
စုတ်တံ ရိုလာ သန့်စင်ပေးခြင်း
အိမ်သုတ်ဆေး သုတ်လိမ်းစဉ် ဆေးသာခြောက်သွေ့သွားပါက မခြောကသွေ့စေရန် စိုစွတ်သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ အိမ်သုတ်ဆေးသုတ်လိမ်းပြီးနောက် စုတ်တံ (သို့မဟုတ်) ရိုလာဒလိမ့်ကို အသုံးပြုကာ ရေနှင့် ဆပ်ပြာဖြင့် သန့်စင်ပေးပါ
Test PDF (PDF - 12,08 KB) Download • Send
အနာအဆာကင်းမဲ့ပြီး ပြီးပြည့်စုံသောနံရံတစ်ခု ပြုလုပ်ပုံ
Weber ၏နံရံပြုပြင်ဖာထေး အချောကိုင် ကုန်စည်သည် အိမ်ရှင်တိုင်းစိတ်သောက ...
အပွင့်ရိုက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? weber.prim concrete အသုံးပြုပေးပါက ယခင်လို ရှုပ်ထွေးမှု မရှိပါ
အပွင့်ရိုက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? နံရံဘိလပ်မြေ ပလာစတာ ...
ကြွေပြားပေါက်ထွက်ခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနှင့် ရုတ်တရက်အအေးလှိုင်းဖြတ်သောအခါ ...
နံရံများအက်ကွဲခြင်း ကွာထွက်ခြင်းသည် ...
ဓာတုဗေဒပညာတွင် အဖြူဂျိုးထွက်ခြင်း(ပြင်သစ်ဘာသာအရ ပန်းပွင့်ခြင်း) ...
သာမန်ကြွေပြားကပ်နည်းမှ ကြာရှည်တည်တံ့ လှပသော ကြွေပြားးကပ်နည်းအသစ်သို့ မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်!
မကြာသေးမီကပင် ကျတော်သည် အိမ်နောက်ဖက်မြက်ခင်းပြင်ရှိ ...
ကြွေပြားနှင့် နှာကြောင်းကြားတွင် အဖြူဂျိုး၊ ဆားဂျိုး၊ ရေဂျိုး နှင့် ...
ကြွေပြား မကပ်မှီး မျက်နှာပြင် လေ့လာခွဲခြမ်းခြင်း
ကြွပြားကပ်ကော်နှင့် နှာကြောင်းဖြည့်ကော် တို့ လုံလုံလောက်လောက် ...
ကားပါကင် ဂိုဒေါင် စက်ရုံများတွင် ကြွေပြားခင်းကျင်းခြင်း
ထုတ်ကုန်များနှင့် နည်းပညာအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန်
မိုးရာသီတွင် ရေယိုစိမ့်မှုကို မည်သို့ပြင်ဆင် တာဆီးကာကွယ် ရမည်နည်း?
မိုးရာသီတွင် လူအများတွင် အေးမြသော အချိန်ဖြစ်သည် ထိုအေးမြသော ရာသီဥတု ...
Tiling of large size အရွယ်အစား ကြီးမားသော ကြွေပြားများအား ထောင့်စွန်းနှစ်ခုကြား အဆက်နေရာများ ဆက်ကြောင်းများအပေါ် ကြွေပြားကပ်ခြင်း
အရွယ်အစား ကြီးမားသော ကြွေပြားများအား ထောင့်စွန်းနှစ်ခုကြား ...
ceramic tile ကဲ့သို့ ရေစုပ်ယူမှု အားကောင်းသော ကြွေပြားများအား အိပ်ခန်း နှင့် ဧည့်ခန်းများတွင် ကြွေပြားကပ်ခြင်း
ရေစုပ်ယူမူ ကောင်းမွန်သော ကြွေပြားကပ်ခြင်း
ရေစုပ်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ ကြွေပြားများ ကွဲပြားခြားခြင်း။
(Clay Tile ကဲ့သို့) ရေစုပ်ယူမူ ကောင်းမွန်သော ကြွေပြားကပ်ခြင်း
ရိုးရိုးကြွေပြားကပ်ကော်ဖြင့် ရွံ့စေးကြွေပြားများကို ...
ကြွေပြားကပ်ကော် အသုံးပြုခင်းကျင်း ပေးခြင်းဖြင့် ကြွေပြားဆွဲအား ...
မဆလာ သို့ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြွေပြားကပ်ခြင်း
ဖိုင်လ်ဘာ စီးမန့်ဘုတ်် (သို့မဟုတ်) သစ်သားပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းခြင်း
သစ်သားနှင့် စီးမန့်ဖိုင်လ်ဘာ ဘုတ်ကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှု့ရန်
ထုတ်ကုန်သစ်: weber.tec non-shrink grout+
ထုတ်ကုန်အသစ်: Weber.base levelling plaster
Saint-Gobain Weber ၏ 'သက်သာလွယ်ကူခြင်း' အပေါ် ယုံကြည်မှု
Weber အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ရှိစာသင်ကျောင်းများအား လှူဒါန်းခြင်း
ပြင်သစ်နိုင်ငံ La Defense မြို့မှာရှိတဲ့ အနာဂတ် Saint-Gobain တာဝါအဆောက်အအုံကြီးပါ
1665-2015: Saint-Gobain ၏နှစ်ပေါင်း 350 သက်တမ်း
Saint-Gobain သည် “အာရှ-ပစီဖိတ်၏ ထိပ်တန်း အလုပ်ရှင်များ 2017” အသိမှတ်ပြုခံရမှုကို ဒုတိယနှစ် အနေဖြင့်ဤနှစ်တွင် ဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်
ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer Europe), ေျမာက္အေမရိက အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer North America), ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer Asia-Pacific)
5 ဆပိုမို သက်သာစေသည်၊ သမာရိုးကျ ကုန်ကျစရိတ်များသော ကွန်ကရစ် အပွင့်ရိုက်ခြင်းစနစ် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
Saint-Gobain သည် ကမ္ဘာထိပ်တန်းလုပ်ငန်း တစ်ခု အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ထိတိုင်အောင် အသိမှတ်ပြုခြင်းခံရ
Saint Gobain သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်တန်း လုပ်ရှင်အဖြစ် တတိယနှစ်အဖြစ် ဆက်တိုက် ချီးမြင့်ခြင်းခံရ
swimming pool in beach side
weber မှ ကြွေပြားကပ်ခြင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပေးသော ...
ရမ် အန်ဘမ့်မန့် ဘယ်လ်ဘီးဒါး, တောင်လန်ဒန်မြို့
A421ဆီသို႔ဖီလ္တာလမ္း | ဘက္ဖိုလ္ျမိဳ႕